Qoraallada Sawir-qaade | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 04/05/2022 19:06 | Textures
Marka naqshadeeyayaashu ay rabaan inay si dhakhso ah oo fudud ugu daraan faahfaahin mashruucyadooda, ma jirto hab ka fiican oo loo sameeyo marka loo eego isticmaalka textures vector. Ku darista muuqaal sawir ama naqshad ayaa shaqadaada u rogi kara 360 darajo., oo u qaadaya heer kale oo xitaa u horseedaya nolosha.
Maanta daabacaadan aad akhrineyso waxaan kuugu soo qaadaneynaa a Liis garee meesha aad ka heli doonto qaar ka mid ah textures ugu fiican ee Illustrator waa inaad ogaataa inaad u isticmaasho shaqada naqshadeynta.
Nasiib wanaag Waxaa jira tiro badan oo ah textures vector oo lacag la'aan ah kuwaas oo laga heli karo boggaga internetka ee kala duwanHaddii aadan haysan waqti aad dib u eegto dhamaantood, ha ka welwelin, waxaan ku tusi doonaa kuwa ugu fiican. Kaliya kuma magacaabi doonno burushka bilaashka ah, laakiin sidoo kale waxaan dooneynaa inaan ka hadalno burushyada Premium oo aad ku shaqeyn karto oo aad siiso qaab gaar ah.
1 textures ugu fiican ee Illustrator
1.1 Unugyada vector-ka Unicorn
1.2 texture grungy
1.3 textures alwaax ee asalka
1.4 texture mowjado
1.5 saamayn t-shirt
1.6 textures dhaqdhaqaaqa
1.7 inky wanaag
1.8 textures tolan
1.9 saamayn tamaashiid
1.10 waraaqo laablaaban
textures ugu fiican ee Illustrator
Haddii aan ka shaqeyneyno mashruuc naqshadeynta, ku darida qaab-dhismeedku waxay samayn kartaa farqi ka mid ah tartamayaashayada.
Noocyada noocaan ah looma isticmaalo oo kaliya in lagu daro asalka shaqada, laakiin sidoo kale saameyn cajiib ah ayaa laga abuuri karaa doorashada saxda ah. Si aad u hesho saameyno gaar ah, kaliya waa inaad isku daraa hababka lakabka iyo textures, abuurista natiijooyin aad u xiiso badan.
Barnaamijyada naqshadaynta kala duwan waxaan ku abuuri karnaa naqshad shakhsi ahaaneed nafteena, laakiin haddii sabab qaar ka mid ah aadan haysan waqti ama aadan si fiican u baran barnaamijyada ku filan, had iyo jeer waxaa suurtogal ah in aad tagto mareegaha aad ka soo dejisan karto.
Sida aan wada ognahay, Bulshada naqshadeynta ayaa aad u ballaaran waxaana mar walba jira dad wadaaga agabkooda garaafyada bilaash. Iyaga, waxaad ka heli kartaa baakado ay ku jiraan noocyo kala duwan oo bilaash ah oo waxtar u leh in lagu daro qaabab iyo saameyno kala duwan.
Unugyada vector-ka Unicorn
Aruurinta gebi ahaanba bilaashka ah 25 Qalabaynta Vector-ka-Unicorn-ku dhiiri galiyay. Doorashada isticmaalka gradients waa hab aad u fiican oo si degdeg ah loogu daro textures iyo midabada shaqadaada kuwaas oo soo jiidan doona dareenka dadweynaha.
Xidhmadan textures for Illustrator waxaad ka heli doontaa jaranjaro siman oo khafiif ah iyadoo la isticmaalayo midabyo pastel dhalaalaya.
Waad ku mahadsan tahay kooxda Pixelbuddha iyo habka digitizing ee texture this, waxaan kuu tilmaamayaa xirmadan 9 gabi ahaanba gacma-sawir textures grunge oo ku jira vector iyo labadaba sida PNG. Waxa kale oo aad ka heli kartaa kala duwanaanshiyaha badhkiis oo ka mid ah faylalkooda.
textures alwaax ee asalka
Tomas Bartko, la wadaag tan kheyraadka naqshadeynta bilaashka ah halkaasoo faylalka ay ku lifaaqan yihiin laba nooc oo qaab ah si ay ugu shaqeeyaan Illustrator CS6, .ai iyo .eps faylka.
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay inaad ku darto saamaynta alwaax ee mashruucaaga gadaasha, tusaalahaan waa adiga. Iyada oo texture alwaax this waxaad ku gaari doontaa qaab dabiici ah naqshadahaaga.
Nashqadeeyaha Tomas Kor, waa abuuraha tan cajiibka ah texture in mowjadaha in aanu kuu keeno gabi ahaanba bilaash ah si loogu isticmaalo, laakiin waa inaad hubisaa inaad Tomas u nisbayso qoraaga.
Mawjad ruxruxo ah oo tayo sare leh, oo leh sii naqshadahaaga qaab gaar ah adiga oo isticmaalaya qaabab iyo midabyo adag. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto naqshadahaaga, adoo u qaadanaya shaqo geesinimo leh oo hadda jira ama liddi ku ah, shaqo aad u yar.
Qoraal kale oo bilaash ah oo aan kuu keenayno, waa kan shaadh duug ah oo la dhaqay saamaynta ay leedahay oo leh daabacado libdhay. Waxaa jira wadar ahaan 9 textures oo kala duwan kuwaas oo kaa caawin doona inaad u beddesho mashaariicdaada qaab dib-u-dhac badan.
Waxaa ka mid ah faylalkeeda, waxaad ka heli doontaa Fursadaha xirashada aadka u macquulsan ee labadaba texture iyo midabka. Ku dar sawiradaada, shaadhka shaadhka lagu daabaco majaajilada, waraaqaha waraaqaha, iwm.
Studio X Imaginary, waxay noo soo bandhigayaan qaybtan saddex textures kala duwan ee dhaqdhaqaaqa tayada sare leh. Sida abuurayaashu si fiican u yiraahdaan, waxay la qabsadaan oo si fiican ugu shaqeeyaan naqshad kasta oo aad rabto inaad sameyso, laga bilaabo naqshad shabakad ilaa boodh.
Waa bilaash in la isticmaalo, laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa in marka aad dhammayso mashruuc ay tahay inaad ku dhejiso, Imaginary X Studio. Hore u soco oo ku dar midab iyo dhaqdhaqaaq naqshadahaaga kumanyaal ilbiriqsi.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa kheyraadka Premium oo aad ka heli karto Envanto Elements. Waxa ku jira 40 midab oo khad la sawiray at 600 dpi oo loo kaydiyay sida faylka tiff. Dhammaan textures, waxaad ka heli kartaa rullaluistemadka khad, dareere, wasakhda khad, iwm.
Kaliya ku shub burushka qaabka aad uga baahan tahay Sawir-qaade, oo bilow abuurista farshaxankaaga adigoo isticmaalaya istaroog khad ah. Haddii aad isticmaasho asalka ama Saldhig warqad jiingado ah waxaad ku gaari doontaa naqshad leh dhammays cajiib ah.
On Behance, oo ah degel ay nashqado badan ku wadaagaan agabka naqshadaynta shakhsi ahaaneed ee bilaashka ah, waxaan helnay tan baakidh texture dhibco ah halftone oo ah 10.
Bartosz Wesolek, naqshadeeyaha na siiya soo dejinta, ayaa noo sheegay in xirmada ay ka kooban tahay .ai, .eps, faylalka svg ee ka shaqeeya CS ama CS6, iyo toban faylal oo png ah oo aad u sarreeya.
Qoraalladan aan ka hadlayno, waxaad u isticmaali kartaa laba siyaabood oo kala duwan, midda koowaad si aad u daahsoon ku dar faahfaahin yar shaqadaada. Dhanka kale, waxaad isticmaali kartaa si aad u abuurto naqshado badan oo dhiirran.
Saamayntan nuuradda caadiga ah, waxaad u isticmaali kartaa shaqooyin aan la tirin karin; sawiro, nashqadaha liiska makhaayadaha, xarfaha, iwm. Waa qaab muuqaal ah oo leh faahfaahin gaar ah, taas oo ka dhigaysa mid ka duwan inta kale ee jilicsanaanta.
Bixinta tayada, xaqiiqada iyo dabiiciga ah maadaama saamayntan lagu helay gacanta iyadoo la isticmaalayo tamaashiirta caadiga ah. Soo ururin dhab ah oo gaar ah oo leh wadar dhan 74 burush texture ah oo nuurad ah oo kala duwan.
Isticmaalka warqad isku laabma waa go'aan aad u fiican in lagu daro xirmadaada texture iyo mashaariicda labadaba. Tusaalahan waxaa ka mid ah 10 nooc oo waraaqo ah, halkaas oo aad ka heli doonto qaabab isku laabma oo kala duwan, kaas oo si toos ah loogu dari doono barnaamijka Illustrator isla marka aad furto faylka.
Halkan waxaan kaaga tagaynaa qaar ka mid ah waxa aanu u aragno inay yihiin xidhmadaha nuxurka muhiimka ah ee ay tahay in naqshadeeye kastaa ku isticmaalo Illustrator. Haddii aad raadinayso inaad ku darto faahfaahin iyo qaabab cajiib ah naqshadahaaga, ha ka waaban inaad isticmaasho mid ka mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Textures » Textures for Illustrator